Ndị na - emepụta Smart mita - China Ndị na - enye mita mita Smart, China
Igwe izipu okpukpu ato okpukpu ato / okpukpu okpukpu ato diiri okpukpo okpukpo okpukpo ma na-eji mgbapinye ike di elu. Igwe okwu nkwukọrịta nke jikọtara ya na ntụkwasị obi ya erutewokwa nzere bara uru. Ọ na - agbakwunye teknụzụ nnabata dijitalụ na sistemụ SMT, ma hazie ya ma rụọ ya dịka ike nke ndị ọrụ si arụ ọrụ.
Mita elele elele elele elele anya otu ohuru bu ihe eji eme ihe nke ike nke ulo oru anyi guzobere ma weputa ya dika oru aka nke GB / T17215.321-2008. Ngwaahịa a na-eji nnukwu sekit agbakwunyere na teknụzụ SMT, ya na ọrụ dị ka tụọ ike eletriki, nhazi data, nyocha oge, yana mmekọrịta ozi.
Igwe okpukpu atọ nke izipu ato / uzo ato nke okpukpu okpukpu okpukpu ato bu sekit buru ibu, na-eji teknụzụ nhazi igwe dijitalụ na usoro SMT, haziri ma mepụta dịka ikike ndị ọrụ si arụ ọrụ. Ọ na-emezu ihe achọrọ GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 na DL / T645-2007 .A nwere ike hazie ihe ndị a dabere na mkpa ọrụ ahụ.